Kolosefo 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Kolosefo 3:1-25
Suban dedaw ne suban foforo (1-17)
Munkum mo nipadua akwaa (5)
Ɔdɔ yɛ hama a edi mũ a ɛde nkabom ba (14)
Afotu a ɛkɔ ma Kristofo mmusua (18-25)
3 Sɛ wɔanyan mo ne Kristo+ a, ɛnde monkɔ so nhwehwɛ nneɛma a ɛwɔ soro, baabi a Kristo te wɔ Onyankopɔn nsa nifa so+ no. 2 Momfa mo adwene nsi nneɛma a ɛwɔ soro so,+ na ɛnyɛ nneɛma a ɛwɔ asaase so,+ 3 efisɛ muwui, na wɔde mo nkwa ahyɛ Kristo nsa* wɔ Onyankopɔn mu. 4 Sɛ wɔda Kristo a ɔyɛ yɛn nkwa+ no adi a, mo nso wɔbɛda mo adi aka ne ho wɔ anuonyam mu.+ 5 Enti, munkum mo nipadua akwaa+ a ɛwɔ asaase so no, sɛnea ɛbɛyɛ a aguamammɔ,* ɔbra fĩ,* nna ho akɔnnɔ a wontumi nhyɛ so,+ akɔnnɔ bɔne, ne adifudepɛ* a ɛyɛ abosonsom renni mo so. 6 Saa nneɛma no nti na Onyankopɔn abufuw reba. 7 Mo nso bere bi a atwam no, saa ara na mobɔɔ mo bra.*+ 8 Nanso afei koko bɔne oo, abufuw oo, nneɛma bɔne+ oo, ɔkasatia+ oo, montow ne nyinaa ngu; mommma kasafĩ+ mmpue mmfi mo anom. 9 Munnni atoro nnkyerɛ mo ho.+ Munyi suban* dedaw no+ ne ne nneyɛe ngu, 10 na monhyɛ suban foforo+ a wɔnam nokware nimdeɛ so reyɛ no foforo no, na ama ɛne nea ɔbɔe no suban asɛ.+ 11 Ɛba saa a, Greeceni anaa Yudani nni hɔ, twetiatwa anaa momonoto nni hɔ,* ɔnanani, Skiteni,* akoa anaa ɔdehye nni hɔ, efisɛ Kristo na biribiara gyina no so, na yɛn nyinaa ne no yɛ baako.+ 12 Moyɛ nnipa a Onyankopɔn apaw mo,+ akronkronfo ne adɔfo. Enti momfa ayamhyehye,+ ayamye, ahobrɛase,*+ odwo,+ ne abotare+ nyɛ ataade nhyɛ. 13 Sɛ obi wɔ asɛm tia ne yɔnko mpo a,+ ɔnkɔ so nnya ne ho abotare na obiara mfa ne yɔnko bɔne nkyɛ no korakora.+ Sɛnea Yehowa* ayi ne yam de akyɛ mo no, mo nso monyɛ saa ara.+ 14 Eyinom nyinaa akyi no, momfa ɔdɔ nyɛ ataade nhyɛ,+ efisɛ ɛyɛ hama a edi mu a ɛde nkabom ba.+ 15 Afei nso, momma Kristo asomdwoe nni mo koma so,+ efisɛ saa asomdwoe no na wɔfrɛɛ mo baa mu wɔ nipadua baako mu. Monyɛ nnipa a wɔkyerɛ anisɔ.* 16 Momma Kristo asɛm no ntena mo mu mmoro so, na moanya nyansa nyinaa bi. Obiara nkɔ so mfa nnwom,+ ayeyi, ne nnwom kronkron a wɔde anisɔ to* nkyerɛkyerɛ ne yɔnko mfa nhyɛ ne yɔnko nkuran,* na monto nnwom mo koma mu mma Yehowa.*+ 17 Na biribiara a moyɛ no, kasa oo, adwuma oo, monyɛ ne nyinaa wɔ Awurade Yesu din mu, na momfa no so nna Agya Onyankopɔn ase.+ 18 Ɔyerenom, mommrɛ mo ho ase mma mo kununom,+ sɛnea ɛsɔ Awurade ani. 19 Okununom, monkɔ so nnɔ mo yerenom,+ na mommma mo bo mmfuw wɔn denneennen.*+ 20 Mma, muntie mo awofo asɛm ade nyinaa mu,+ na eyi na ɛsɔ Awurade ani. 21 Agyanom, monnhyɛ mo mma abufuw+ na wɔn abam ammu. 22 Nkoa, ade nyinaa mu no, muntie mo wuranom a wɔwɔ asaase so.*+ Ɛnyɛ bere a wohu nea moyɛ nko na ɛsɛ sɛ moyɛ saa, na ankɔyɛ sɛ nea moresɔ nnipa ani,* na mmom momfa koma a emu tew nyɛ wɔ Yehowa* suro mu. 23 Sɛ moreyɛ biribiara a, mumfi ɔkra* nyinaa mu nyɛ no sɛnea moreyɛ ama Yehowa*+ na ɛnyɛ nnipa, 24 efisɛ munim sɛ agyapade a wɔde betua mo ka no fi Yehowa* hɔ.+ Monyɛ nkoa a mosom Owura Kristo no. 25 Nokwarem no, nea ɔyɛ bɔne no benya adebɔne a ɔyɛe no so akatua,+ na animhwɛ biara remma mu.+
^ Anaa “ahintaw Kristo mu.”
^ Anaa “anibere.”
^ Anaa “saa ara na monantewee.”
^ Nt., “onipa.”
^ Anaa “obi a wɔatwa ne dua anaasɛ obi a wontwaa ne dua nni hɔ.”
^ Sɛ obi ka sɛ “Skiteni” a, ɛkyerɛ atetekwaa.
^ Anaa “wɔwɔ ayɛ.”
^ Anaa “ɛho wɔ nyam.”
^ Anaa “ntu ne yɔnko fo.”
^ Anaa “mommpoopoo mo ani nnkyerɛ wɔn.”
^ Nt., “honam fam wuranom.”
^ Nt., “na ɛnyɛ ani so som mu, sɛ wɔn a wɔsɔ nnipa ani.”